တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ်၌ သောင်တင်နေသော ဝေလငါးအား ကယ်ဆယ်ပေးခဲ့ - Xinhua News Agency
နင်းပေါ ၊ ဧပြီ ၂၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ် နင်းပေါမြို့ ရှန့်ဆန်းခရိုင်၌ ကယ်ဆယ်ရေးသမားများသည် ဧပြီ ၂၀ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် သောင်တင်နေသော ဝေလငါးတစ်ကောင်အား ပင်လယ်ထဲသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိအောင် ကူညီပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နင်းပေါမြို့ ရှန့်ဆန်းခရိုင်၌ ကယ်ဆယ်ရေးသမားများက သောင်တင်နေသော ဝေလငါးအား ကူညီပေးနေသည်ကို ဧပြီ ၂၀ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အဆိုပါ ဝေလငါးသည် ဧပြီ ၁၉ ရက်တွင် ရှန့်ဆန်းခရိုင်အတွင်းရှိ ကမ်းခြေပေါ် သောင်တင်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Stranded whale rescued in E China’s Zhejiang
NINGBO, April 20 (Xinhua) — Rescuers on Wednesday morning helpedawhale get back into the sea in Xiangshan County of Ningbo, east China’s Zhejiang Province.
The whale ran aground on the beach in Xiangshan on Tuesday.
Photo 1 – A stranded whale swims back into the sea in Xiangshan County of Ningbo on April 20, 2022. (Xinhua)
Photo2– Rescuers helpastranded whale in Xiangshan County of Ningbo on April 19, 2022. (Xinhua)
Photo3– Rescuers helpastranded whale in Xiangshan County of Ningbo on April 19, 2022. (Xinhua)
Photo4– Rescuers helpastranded whale in Xiangshan County of Ningbo on April 19, 2022. (Xinhua)
Photo5– Rescuers helpastranded whale in Xiangshan County of Ningbo on April 19, 2022. (Xinhua)■
တရုတ်နိုင်ငံ ချုံချင့်မြို့၏ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုမှာ ပထမ သုံးလပတ်အတွင်း မြင့်တက်
ယူကရိန်းနိုင်ငံတွင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်း ပြီးဆုံးရန်မှာ ပဋိပက္ခအား ဆောလျင်စွာအဆုံးသတ်ရေးပင်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်သံတမန်ပြော